Hordhaca Horyaalka Soomaliya:-Maxaa Kala Haysta Kooxaha Banaadir SC VS Dekedda
Thursday, July 19th, 2018 - 07:01:45
Wednesday July 26, 2017 - 10:36:39 in Wararka by Kubad Bile
Kooxda difaacanaysa horyaalka Soomaliya ee Banaadir SC ayaa soo dhawaynaysa Dhigeeda Dekedda,iyagoo wada ciyaaridoono kulankii 85-aad horyaalka Soomaliya olalaha 2016-2017.
Wiilasha uu leeliyo tababaraha reer Uganda Mblangu Xuseen kulankii u dambeeyay waxa ay 3-0 kusoo garaaceyn dariskooda Jeenyo waxayna goolasha ugu mahad celianysaa xidigaha kala ah Marcelo Odhimbo Samsung oo labo gool kulankaas dhahliyay iyo C/qaadir Aadan Eenow.
Kooxda Banaadir SC waxa ay xaadir ku tahay kaalinta 2-aad ee kala sareynta horyaalka waxayna lee dahay 30-dhibcood.
Kooxda Dekedda kulankii u dambeeyay waxa ay 2-0 ku dharbaaxday dhigeeda Elman waxaana labada gool u dhaliyay xidigaha kala ah C/qaadir Siidow Cali iyo C/Casiis Max’ed Catoosh,xili labada xidig ay xagaagan ku qaadanayaa waqti wacan,iyagoo Dekedda kaga soo biiray kooxaha Jeenyo iyo FC Banaadir.
Wiilasha uu hogaamiyo Macalin Yuusuf Cali Nuur ee Dekedd ayaa olalahaan qasaaray hal kulan,iyagoo bishii Febraayo guul daro 2-1 kala kulmay kooxda Horseed,kooxda Dekedda waxa ay fadhisaa booska 1-aad ee kala sareynta horyaalka Soomaliya 2016-2017 waxayna lee dahay 35-dhibcood.
Macalinka reer Uganda Mblang Xuseen ayaa raadinaya guushii ugu horeesay uu ka gaaro kooxda Dekedda tan iyo markii Soomaliya imaaday xagaagii 2014-2015.
Kulankii kowaad uu kooxda Dekedda wajahay waxa ay aheyd 13-05-2015 markaas oo ay kooxda Dekedda 1-0 ku dharbaaxda Banaadir SC waxaan goolka xiligaas u dhaliyay C/Casiis Hoomey waxaana Dekedda Macalin u ahaa Cabdi Joon,iyagoo hada kuwada sugan kooxda Elman.
Xasan Santos ayaa markii ugu horeesay ka hor imaandoono kooxdiisa hore Dekedda,isagoo dhamaadkii April ku biiray kooxda Banaadir SC wuxuuna hada kaliya u ciyaaray labo kulan.
Tariikhdii ay u dhigeyn Cabdii Joon iyo C/Casiis Hoomey waxaa dib u jibiyay Macalin Yuusuf Cali Nuur iyo C/Kariim C/lla Max’ed (Qubaaye), iyagoo 09-03-2017 Banaadir SC markale ku dharbaxay 1-0.
Kinene Kafunayo Imam joogii dheerihii reer Uganda ayaa isagan ka hor imaadoonin kooxda Dekedda,xili Banaadir SC uu ka hayaamay dhamaadkii bishii May waxaana la sheegay in uu ku biiray kooxda Heegan.
Kabtan Daadir Amiin Cali (Daa’daa) ayaa kooxdiisa iyo kulankaba ugu muqan dhaawac,isagoo garoomada kusoo laabandoono xagaaga soo aadan 2017-2018.
11/05/2016 BanaadirSC 0:0 Dekedda
Kooxaha:-Banaadir SC VS Dekedda
Cimiladda Xiliga Ciyaarta: - 28°24°
Qiimaha Kulanka:-10.00.Shilling Som